Muxuu noqon doonaa Mustaqbalka Al-Shabaab.? – Radio Muqdisho
Waxa kaliya ee la ogyahay ayaa ah in xaaladdiisa ay aad u liidatay markii ugu danbaysay, isla markaana uu gabay masuuliyaddii ahayn hoggaaminta maleeshiyada Argagixisada ah ee AlShabaab, Axmed Diiriye oo AlShabaabka dhexdiisa looga yeero Abuu Cubayda wuxuu ku magacaabanyahay horjoogaha Al_Shabaab tan iyo markii la qaarajiyay horjoogihii ka horeeyay ee Axmed Godane, haseyeeshee waxaa mudooyinkaan danbe dhulka dhigtay Xanuuno Badan oo isugu biiray.
In ka badan Hal Sano ayuu la liitaa Axmed Diiriye cudurka Kensarka (Cencer), wayna ka sii daraysa xaaladiisa sida ay sheegayaan ila wareedyo muhiim ah oo aan helnay, iyadoo maleeshiyadaan Argagixisada ah ay ku guul daraysteen inay horjoogahooda ay u helaan meel wax looga qabto caafimaadkiisa.
Dhaqankaan foosha xun ee ku salaysan danaysiga laakiin mgaca diinta ay ku hoos qarinayaan ayaa ah mid ay aad u sii fahmayaan shacabka Soomaaliyeed, kuwaas oo markii hore aaminsanaa in Al-Shabaab ay u dagaalamayaan diin.
Diyaar garowga ololaha cafis oo si habsami leh uga socda Soomaaliya “SAWIRRO”